भनिन्छ, फेसबुक मा ‘फार्मभिल्ला’, ‘माफियावार’ जस्ता ‘गेम, एप्लिकेशन’ बाट ‘जिङ्ग’ (Zynga, /zɪŋɡə/) ले वर्षेनी करोडौँ डलर आम्दानी गरिरहेको छ । गत साल (२०१०) मा पनि ‘जिङ्ग’ ले ‘फेसबुक एप्लिकेशन’ हरुबाट नै सत्तरी-असी करोड डलर आम्दानी गरेको थियो । ‘जिङ्ग’ को बढ्दो लोकप्रियता का कारण उक्त कम्पनीले ‘फेसबुक एप्लिकेशन’ बनाउनै का लागि केही महिना पहिले भारतमै कम्पनी खोलेको थियो ।
‘फेसबुक को एप्लिकेशन’ बाट कसरी कुनै कम्पनी ले पैसो कमाउँछ, कसरी त्यो कम्पनी धनि हुन्छ ? सायद तपाई पनि यसै सोच्दै हुनुहुन्छ होला । साँच्चै ‘फेसबुक एप्लिकेशन’ बाट कम्पनीहरुले कसरी आम्दानी गरिरहेका छन् त ? आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ या याद नगर्नु भएको हुन सक्छ तर ‘जिङ्ग’ जस्तो ‘फेसबुक एप्लिकेशन’ बनाउने कम्पनीहरुले ‘इमोशनल अत्याचार’ गरेरै आम्दानी गर्छन् भन्दा फरक नपर्ला । यसलाई अर्को वाक्यमा भन्दा, “मानिसहरुको मनोविज्ञानलाई नै ती कम्पनीहरुले ‘क्यास’ गर्छन्” । ‘फेसबुक एप्लिकेशन’ मा देखिने विज्ञापनहरु बाट ‘जिङ्ग’ जस्ता कम्पनी धनि भएका होइनन्, न कुनै ‘ब्यानर’ वा ‘ग्याजेट’ राखेर नै ! फेसबुकमा देखिने विज्ञापनबाट ‘फेसबुक’ ले आम्दानी गर्छ, ‘एप्लिकेशन’ बनाउने कम्पनीले हैन । हुन त सिधै पैसा तिरेर चलाउनु पर्ने ‘एप्लिकेशन’हरु पनि फेसबुक मा छन्, र त्यसबाट ती एप्लिकेशन बनाउने कम्पनीहरुले आम्दानी गरिरहेका छन् ।
जिङ्ग (Zynga) कम्पनीले कसरी आम्दानी गर्छ, ‘फेसबुक गेम एप्लिकेशन’ बाट ?
जिङ्ग को बिजनेस मोडल ‘साधारण’ छ, प्रयोगकर्तहरुलाई खेलमा अभ्यस्त गराउने, ‘एडिक्ट’ गराउने, भर्चुअल सामाग्रीहरु किन्ने बनाउने भर्चुअल पैसा (‘फेसबुक क्रेडिट’) बाट । प्रयोगकर्ता को ‘मनोविज्ञान’ लाई ‘पैसा मा सटही’ गर्न जिङ्ग सफल भएको छ तर पनि आम्दानी गर्न सोचेजति सजिलो भने पक्कै छैन । प्रयोगकर्ताहरु खेलको ‘एडिक्ट’ बनेपछि मात्र कम्पनीले आम्दानी गर्न सक्छ ।
उदाहरण का लागि ‘जिङ्ग’ ले बनाएको ‘फिसभिल्ला’ नामक फेसबुक ‘एप्लिकेसन’लाई लिउँ । ‘फिसभिल्ला’ मा ‘भर्चुअल एक्वारियम’ बनाएर माछा पाल्न सकिन्छ । ‘फिसभिल्ला’ भनेकै माछापालन गर्ने ‘फेसबुक गेम/एप्लिकेसन’ हो, जुन भर्चुअल रुपमा साथिहरु सँग खेल्न सकिन्छ । ‘फार्मभिल्ला’, ‘माफियावार’ आदि पनि भर्चुअल रुपमा नै, साथी/समूहमा खेल्ने ‘खेल’ हो । ती खेलहरु खेल्दै जाँदा, प्रयोगकर्ताहरु त्यसप्रति ‘एडिक्ट’ बन्न पुग्छन्, र नक्कली पैसा बाट सुरु भएको खेलमा सक्कली पैसा को प्रयोग सम्म हुन पुग्छ । मानविय संवेदना या भनौँ मानिसको मनोविज्ञान बाट नै ती कम्पनीहरुले आफ्नो आम्दानी गर्छन् ।
बिजनेस इनसाइडर का अनुसार ‘फिसभिल्ला’ भन्ने खेल मा थरिथरिका माछाहरुलाई एक्वारियम मा पालिन्छ । खेल भनेकै जित्न को लागि हो, अत: यस खेलमा प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो एक्वारियमलाई राम्रो र स्तरिय बनाउन चाहन्छन् साथै, थरिथरि का माछाहरुले एक्वारियम सजाउन चाहन्छन् । अत: फेसबुकमा गेम खेल्नेहरु, अफलाइन हुँदा पनि, कसरी खेल जित्न सकिन्छ भनेर समूहमा बसेर छलफल गर्न पनि पछि पर्दैनन् । उनीहरु गेमखेल्न कै लागि फेसबुक मा साइन इन हुन्छन्, एकछिन थकाइ मार्छन् र फेरि खेल्न सुरु गर्छन् ।
खेल खेल्नलाई ‘नक्कली पैसा’ दिएको हुन्छ, जसबाट मन लागेको र किन्न सकिने कुराहरु किन्छन् खेलाडिहरु । उनीहरु भएको पैसा ले अझ धेरै ‘रिसोर्स’ किन्छन्, अनि त्यसलाई धेरै पारेर फेरि नक्कली पैसामै अरु खेलाडिलाई बेच्छन् ।
त्यसरी उनीहरु आफ्नो पैसा ‘फिसभिल्ला’ मा ‘सानो माछा’ किन्न मा खर्च गर्छन् ती माछाहरुलाई पाल्छन् र अरुलाई बेच्छन् अनि पैसा आम्दानी गर्छन् । तर खेलमा एडिक्ट भएपछि यस्तो अवस्था आउँछ कि, तपाईलाई विपक्षीलाई जित्नै मन लाग्छ । मान्छे को स्वभाव नै त्यस्तै हुन्छ, अर्को भन्दा म राम्रो गर्छु, म अगाडि जान्छु भन्ने भावना हुन्छ । अत: खेल मा एडिक्ट भएका प्रयोगकर्ताहरु, आफू जित्न या भनौँ आफूलाई सम्पन्न र धनि बनाउन फेसबुक को नक्कली पैसा लाई ‘सक्कली पैसा’ ले किन्छन् ।
जस्तो कि ‘फिसभिल्ला’ मा ‘नक्कली पैसा’ मा सानो सानो माछा पाइन्छ र ती माछाहरु ठूलो हुन धेरै समय लाग्छ, ती माछाहरु को लागि सिमित खान्की हुन्छ । तर तपाई आफ्नो विपक्षीले चाँही धेरै प्रगति गरेको देख्नुहुन्छ, खेल खेल्दै गएपछि तपाई को उद्देश्य नै विपक्षीलाई जित्नु हुन्छ, कारण जितबाट खेल को आत्मसन्तुष्टि मिल्छ । सँधै खेल हारियो भने खेल्न मन लाग्दैन, विपक्षीले पनि गिज्याए झैँ लाग्छ । अत: तपाई भित्र को संवेदना या भनौँ मनोविज्ञान ले तपाईलाई खेल जित्नै पर्छ भनेर घच्घच्याउँछ ।
अनि तपाई आफ्नो माछाहरुलाई छोटो समय मा वृद्धि गर्न, ठूला ठूला माछाहरु किन्न या भनौँ माछाहरु को आहार/खान्की किन्न, आफ्नो सक्कली पैसाले ‘नक्कली पैसा’ किन्नुहुन्छ र खेल खेल्नुहुन्छ । ती खेलहरुमा निकै थोरै पैसा तिर्ने भएका कारण, तपाईलाई पैसा गएको जस्तो लाग्दैन । तर खेल खेल्ने मान्छेहरु लाखौँ को सङ्ख्यामा भएका कारण, ‘जिङ्ग’ ले चाँही समष्टिमा धेरै आम्दानी गरिरहेको हुन्छ । अनुसन्धानका अनुसार एक व्यक्तिले एउटा खेलमा ३ डलर प्रतिवर्ष खर्च गरिरहेको हुन्छ । एकजना को आधारमा वर्ष को ३ डलर भनेको रकम निकै थोरै हो, तर लाखौँका सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ताहरु संसारभर भएका कारण ‘जिङ्ग’ ले ‘फिसभील्ला’ जस्ता ‘फेसबुक एप्लिकेशन’ बाटै करोडौँ डलर कमाउँछन् ।
फेसबुक मा गेम खेल्नेहरु को हालत अन्तिम मा यस्तो हुन्छ रे ! :P
यो ब्लग बिजनेस इन्साइडर को लेख “How A Stupid Facebook Game Makes Zynga Millions” को आधारमा लेखिएको हो । अधिक जानकारी को लागि बिजनेस इन्साइडर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
A normal Guy August 1, 2012 at 11:50 AM
Can't believe such things also exist. Its nice to know how people earn real money though virtual stuffs. Nice blog..
www.meromaya.net August 1, 2012 at 11:50 AM
के तपाइ विश्वको कुनैपनि कुनामा आफुले निशुल्कमा चाहे जति एस.एम.एस पठाउन चाहनुहुन्छ ? www.meromaya.net मा जानुहोस् ।